Ukuhambisa okulula: Intengo yokuhambisa, ukulandela ngomkhondo, ukufaka ilebula, izibuyekezo zesimo, nezaphulelo ze-ecommerce Martech Zone
Kukhona ithoni yokuxakaniseka ne-ecommerce - kusuka ekucutshungulweni kokukhokha, ukusetshenziswa kwempahla, ukugcwaliseka, kuze kufike ekuthumeleni nasekubuyiseni - izinkampani eziningi ezingazinaki njengoba zithatha ibhizinisi lazo online. Ukuthumela, mhlawumbe, kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu kunoma yikuphi ukuthengwa kwe-inthanethi - kufaka phakathi izindleko, usuku lokulethwa olulinganiselwayo, nokulandela ngomkhondo.
Izindleko ezingezekile zokuhambisa, izintela, nezimali zikhokhelwe ingxenye yazo zonke izinqola zokuthenga ezishiyiwe. Ukulethwa okuhamba kancane kwakubhekele i-18% yezinqola zokuthenga ezishiyiwe.
Ukuhlanganisa isixazululo sokuthumela akwenzi nje kuphela ukuthi isipiliyoni samakhasimende kube ngcono futhi kukhuphule amazinga wokuguqulwa, kungakongela nemali njengoba lezi zinhlelo zingafinyelela amazinga wokuthumela ongazange uqonde ukuthi akhona. ShippingEasy ingenye yalezo zinhlelo.
UkuthumelaKulula iyi-platform yokuhlanganiswa kwemikhumbi eku-inthanethi ehlanganiswe nayo yonke ipulatifomu ethandwayo ye-e-commerce futhi isebenza nenqwaba yezinsizakalo zokuthumela - kufaka phakathi i-UPS, i-FedEx, i-DHL eCommerce, i-DHL Express, i-Endicia, i-USPS Discounted Rate Table, i-USPS CPP ne-CBP, ne-USPS Ibhokisi Lezilinganiso Zesifunda.
Vula Amanani Wokuthumela Ongcono - Finyelela intengo ye-Commercial Plus — amanani wokuthumela aphansi aqinisekisiwe — kungakhathalekile ukuthi usayizi ungakanani. Futhi, thola izaphulelo zamanani kanye nezaphulelo zomshwalense.
Phrinta Amalebula Ngokushesha - Amalebula wokuphrinta, lawula ama-oda, ukuhambisa okuzenzakalelayo, ukulandelela ukuthunyelwa, nokwazisa abamukeli — konke kusiteji sokuthumela esisebenziseka kalula esisodwa.
Ukulandelela nokubuyisa - Ukulandela umkhondo nezimbuyiselo kuyingxenye ebalulekile yesipiliyoni samakhasimende e-commerce. UkuthumelaKwenza kubelula kuwe nakumakhasimende akho
Shintsha ukuhamba komsebenzi - I-automation enamandla inika amandla ukuthunyelwa, ukulandelela, nokubuyisa ukuze ukwazi ukugxila kuzinto ezibaluleke kakhulu — njengokwakha ibhizinisi lakho.
Ukubika Okuthuthukisiwe - Thola imininingwane oyidingayo ukuze uhlale phezulu kokuthumela kwakho, amakhasimende, nokulandela ngomkhondo, konke endaweni eyodwa.
Ukuthunyelwa Kokumaketha Kwe-imeyili Okuzenzakalelayo
Abathengisi abaku-inthanethi bangasebenzisa idatha yoku-oda nokuthumela ukuthumela ngokuzenzakalela ukuxhumana kumakhasimende abo, kufaka phakathi ama-imeyili athi:
Inqola Yokuthenga Engasekho - buyisa amakhasimende awaziwayo ashiye izinto enqoleni yawo.
Khiqiza ukubuyekezwa komkhiqizo - Xhumanisa ngqo emuva izinto ngokulandelana
Imikhiqizo ehlobene ne-Upsell - Kususelwa kuzinto ngokulandelana
Nikeza amadili namakhuphoni - Ngokusekelwe enanini lenani eliphelele noma izinto ezithengiwe
Win emuva amakhasimende - Kususelwa esimweni sokungasebenzi
Ngaphezu kwalokho, kukhona umtapo wolwazi wezifanekiso ze-plug-and-play ukwenza ukusetha kube yi-snap. Ithimba labo losizo lwamakhasimende eliwusizo futhi lisiza ukusetha imithetho nokunquma ngamathempulethi, futhi, kubathengisi abanolwazi oluncane lokumaketha nge-imeyili.
UkuthumelaKulula ikhiqize ukuhlanganiswa ne-3dcart, i-Amazon Prime Shipping, i-Amazon Seller Central, i-BigCommerce, i-ChannelAdvisor, i-eBay, i-Etsy, iMagento, i-Prestashop, Ama-Quickbooks, Thenga, Isitolo, Volusion, WooCommerce, Yahoo! Izitolo, nokuningi. Futhi banelabhulali ephelele ye-API yokuhlanganisa amapulatifomu we-e-commerce aphathelene.
Lula Ukuthumela Kwakho bese Gcina nge-ShippingEasy! Qala isilingo sakho samahhala sezinsuku ezingama-30 Manje!
Ukudalulwa: Singabanikazi be- UkuthumelaKulula.
Tags: 3dcartinqola yokuthenga elahliweUkuthumela Okukhulu kwe-AmazonUmthengisi weAmazon centralI-BigCommerceI-ChannelAdvisorI-DHL eCommerceDHL ExpresseBayI-EndiciaIzyI-FedExUkuhlanganiswaMagentoukuzenzekelayo kokuzenzekelayoPrestaShopAma-QuickbooksAma-API wokuthumela.ezenzakalelayo lokuthumelaamalebula okuthumelaukuhambisa ukuhambisakokulandela ngomkhondoukugeleza kokuhamba komsebenziumkhumbithengaisitoloukulandelela ngomkhondoupsI-USPS CBPI-USPS CPPI-USPS CPP vs CBPIthebula Lesilinganiso Esinephulelo le-USPSIbhokisi Lokukala Lesifunda le-USPSukuqhumaWooCommerceYahoo! Izitolo
Izithombe Zediphozithi: Izithombe ezingabizi kakhulu zamaRock-Free ngeReverse Image Lookup!
Ukukhipha i-B2B Lead Generation 2021: Izizathu Eziyishumi Eziphezulu Zokuthanda Ukuphuma